လူစားလဲခံရမှုကွောငျ့ အကွီးအကယျြဒေါသထှကျနတေဲ့ ရျောနယျဒိုကို ရနျးနဈချ ဘာပွောခဲ့သလဲ? – Play Maker Sports Journal
January 20, 2022 playmaker Sports News 0
အဆိုပါပှဲစဉျရဲ့ဒုတိယပိုငျးတှငျအီလနျဂါကဖရကျရဲ့ပေးပို့မှုကနေ ခေါငျးတိုကျပွီးယူနိုကျတကျအတှကျအဖှငျ့ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီးဘရူနိုဖာနနျဒကျဈရဲ့ခပြေေးမှုကနဂေရငျးဝုဒျကနဒေုတိယဂိုးသှငျးယူခဲ့ပါတယျ။ယူနိုကျတကျအတှကျတတိယဂိုးကိုပွီးခဲ့တဲ့ရကျသတ်တပတျမြားတှငျခွစှေမျးမပွနိုငျမှုကွောငျ့ဝဖေနျခံနရေတဲ့ ရပျရျှဖို့ဒျကသှငျးယူခဲ့ပါတယျ။
ယခုအခါ The Athletic ရဲ့လျောရီဝှိုကျဝဲလျကရနျးနဈချကရျောနယျဒိုကိုပွောကွားခဲ့တဲ့စကားကိုဖှငျ့ခလြာပါတယျ။
ရနျးနဈချက “သူကငါ့ကိုဘာလို့လူစားလဲလိုကျတာလဲလို့မေးပါတယျ။ကြုပျကလညျးအသငျးအတှကျကလပျအတှကျလူစားလဲလိုကျတာလို့ပွောခဲ့ပါတယျ။နောကျထပျနှဈအနညျးငယျအကွာမှာသူနညျးပွဖွဈလာတဲ့အခါဒါကိုသူနားလညျလာပါလိမျ့မယျ”လို့ပွောကွားခဲ့ကွောငျး ဝှိုကျဝဲလျက ဖျောပွသှားပါတယျ။
ရနျးနဈချက “၂-၀နဲ့ဦးဆောငျနတေယျ။ဗီလာပါ့ချနဲ့ပှဲတုနျးကသငျခနျးစာရခဲ့ပွီးပါပွီ။ပှဲပွီးတော့နောကျတနျးငါးယောကျမပွောငျးခဲ့မှုအတှကျအရမျးဒေါသထှကျခဲ့ရတယျ။ဒီနလေ့ညျးအဲဒီအခွအေနကွေုံလာတယျ။အဲဒီလိုအမှားမြိုးနောကျထပျမကြူးလှနျခငျြပါဘူး။ ကြှနျတျောက ‘နားထောငျ၊ခရစ်စတီယာနို၊ မငျးအသကျ၃၆နှဈရှိပွီ။ကွံ့ခိုငျနတေုနျးပါ။ဒါပမေဲ့မငျးနညျးပွခြုပျဖွဈလာတဲ့အခါနညျးပွတဈယောကျရဲ့မကျြမှနျကနမွေငျရတဲ့အမွငျမြိုးရလာလိမျ့မယျ။ ကြှနျတေျာ့အလုပျကအသငျးနဲ့ကလပျအတှကျအကောငျးဆုံးဖွဈမယျ့ဆုံးဖွတျခကျြကိုခရြပါမယျ။သူလညျးအဲဒီလိုပဲမွငျဖို့မြှျောလငျ့ပါတယျ”လို့ ပွောကွားသှားပါတယျ။
လူစားလဲခံရမှုကြောင့် အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့ ရော်နယ်ဒိုကို ရန်းနစ်ခ် ဘာပြောခဲ့သလဲ?
အဆိုပါပွဲစဉ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းတွင်အီလန်ဂါကဖရက်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေ ခေါင်းတိုက်ပြီးယူနိုက်တက်အတွက်အဖွင့်ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ချေပေးမှုကနေဂရင်းဝုဒ်ကနေဒုတိယဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ယူနိုက်တက်အတွက်တတိယဂိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်များတွင်ခြေစွမ်းမပြနိုင်မှုကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်ကသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
ယခုအခါ The Athletic ရဲ့လော်ရီဝှိုက်ဝဲလ်ကရန်းနစ်ခ်ကရော်နယ်ဒိုကိုပြောကြားခဲ့တဲ့စကားကိုဖွင့်ချလာပါတယ်။
ရန်းနစ်ခ်က “သူကငါ့ကိုဘာလို့လူစားလဲလိုက်တာလဲလို့မေးပါတယ်။ကျုပ်ကလည်းအသင်းအတွက်ကလပ်အတွက်လူစားလဲလိုက်တာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာသူနည်းပြဖြစ်လာတဲ့အခါဒါကိုသူနားလည်လာပါလိမ့်မယ်”လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဝှိုက်ဝဲလ်က ဖော်ပြသွားပါတယ်။
ရန်းနစ်ခ်က “၂-၀နဲ့ဦးဆောင်နေတယ်။ဗီလာပါ့ခ်နဲ့ပွဲတုန်းကသင်ခန်းစာရခဲ့ပြီးပါပြီ။ပွဲပြီးတော့နောက်တန်းငါးယောက်မပြောင်းခဲ့မှုအတွက်အရမ်းဒေါသထွက်ခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့လည်းအဲဒီအခြေအနေကြုံလာတယ်။အဲဒီလိုအမှားမျိုးနောက်ထပ်မကျူးလွန်ချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က ‘နားထောင်၊ခရစ္စတီယာနို၊ မင်းအသက်၃၆နှစ်ရှိပြီ။ကြံ့ခိုင်နေတုန်းပါ။ဒါပေမဲ့မင်းနည်းပြချုပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါနည်းပြတစ်ယောက်ရဲ့မျက်မှန်ကနေမြင်ရတဲ့အမြင်မျိုးရလာလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်အလုပ်ကအသင်းနဲ့ကလပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရပါမယ်။သူလည်းအဲဒီလိုပဲမြင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်”လို့ ပြောကြားသွားပါတယ်။